January 17, 2022 F.G 0
Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa Goordhow ka duushay Diyaarad lagu qaaday dhaawaca Afhayeenka Xukuumadda Federaalka Maxamed Ibraahim Macalimuu oo shalay lala beegsaday qarax Is-miidaamin ahaa. Dhaawaca Afhayeen Macalimuu ayaa Garoonka Aadan Cadde looga qaaday diyaarad qaas oo ah kuwa Caafimaadka oo lagu geyn doono dalka Turkiga, si xaaladdiisa Caafimaad loogu dabiibo, waxaana Garoonka ka sagootiyey Mas’uuliyiin iyo bahda Warbaahinta. Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa Goordhow ka duushay Diyaarad lagu qaaday dhaawaca Afhayeenka Xukuumadda Federaalka Maxamed Ibraahim Macalimuu oo shalay lala beegsaday qarax Is-miidaamin ahaa. Dhaawaca Afhayeen Macalimuu ayaa Garoonka Aadan Cadde looga qaaday diyaarad qaas oo ah kuwa Caafimaadka oo lagu geyn doono dalka Turkiga, si xaaladdiisa Caafimaad loogu dabiibo, waxaana Garoonka ka sagootiyey Mas’uuliyiin iyo bahda Warbaahinta.
Maxaan ka ognahay dilkii Ikraan Tahliil & Eng Yariisow?
Cabdisataar Xasan Cali oo ka mid ahaa dhallinyarada ka shaqeyneysay Safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay Dalka Keyna, oo marti ku ahaa Ha noolaato ayaa ka hadlay arrimo badan oo ku saabsan Dilkii loo geystay Ikraan Tahliil oo ka tirsaneyd Hay’adda Nabad Sugidda Qaranka ee NISA, dilkii loo geystay Alle Ha u naxariisto duqii hore Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Eng Yariisow iyo duulaankii loogu talagalay in lagu soo qabto Madaxweynaha Dowlad Goboleydka Jubaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Cabdisataar Maxamed oo u waramayay Hanoolaato. Muxuu ka dhahay dilkii Ikraan Tahliil Warsame. Ikraan iyo Cabdisataar oo ahaa saaxiibo kuwada noolaa dalka Kenya ayaa 8 Juun 2021 waxa ay kuwada kulmen magaalada Muqdisho, Cabdisataar oo ka tirsanaa hay’adda Hiraal ayaa sheegay inay maalintaas habeenkeedii wada balameyn ayada oo kaga baahneyd arrimo la xariiro Baasabor maadaama ay Ikraan heystay Baasaborka Kenya. Ikraan waxa ay ka shaqeyn jirtay Xafiiska Duqii Hore ee Muqdisho Eng Yariisow, marka uu dhintay duqa muqdisho ayee ka tagtay xafiiska Eng Yariisow oo waxa ay ku laabatay dalka keyna. Ikraan waxa ay wax ku baratay dalka [Sii aqri]
Guddiga hirgelinta doorashada ee maamulka Jubbaland ayaa ku dhowaaqay doorashada illaa 13 kursi oo ka mid ah kuraasta taalla deegaanada maamulkaasi, gaar ahaan magaallo xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Kuraasta la shaaciyey oo dhowaan la qabanayo doorashadooda ayaa kala ah: HOP023, HOP 029, HOP 072, HOP 079, HOP 092, HOP 112, HOP 124, HOP 127, HOP 130, HOP 132, HOP 133, HOP 136 iyo HOP 219. Sidoo kale guddiga ayaa shaaca ka qaaday inuu dib ka baahin doono jadwalka doorashada kuraastaan iyo sida ay u kala horreeyaan. “Waxaa dib kasoo sheegi doonaa jadwalka iyo kala horreynta kuraasta kor ku xusan,” ayaa lagu yiri warqadda kasoo baxday guddiga doorashada ee Jubbaland.Tallaabada ay Jubbaland u qaaday doorashada ayaa qayb ka ah fulinta heshiiskii siyaasadeed ay dhowaan Golaha Wadatashiga Qaran ku gaareen Muqdisho. 1-HOP023 waxaa afartii sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey Cali Maxamed Muuse 2-HOP 029 waxaa afartii sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey Liibaan Cusmaan Cabdiraxmaan 3-HOP 072 waxaa afartii sano ee lasoo dhaafay ku fadhiyey Cabdirashiid Maxamed Xiddig 4-HOP 079 waxaa afartii sano [Sii aqri]
Xaaladihii U Dambeeyay ee Xaalada Caafimaad Afhayeenka Dowlada Macalimuu
Xaalada caafimaad ee afhayeenka xukuumada Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimuu oo shalay ku dhaawacmay qarax ay argagixisada Al-Shabaab u soo maleegeen ayaa ka soo reyneysa sida uu sheegay agaasimaha warfaafinta xafiiska Ra’iisul Wasaaraha. Agaasimaha warfaafinta ee xafiiska ra’iisul wasaaraha dalka Liibaan Cabdi Cali ayaa Warbaahinta Qaranka u sheegay in dhaawaca Macalumuu uu yahay mid ka fudud sidii ay wax u dhaceen, isla markaana uu jiro jab ka soo gaaray lug iyo dhaawacyo kale oo fudud, sida uu sheegay Agaasime Libaaan. Dhanka kale raysal wasaare Rooble ayaa xalay Isbitaalka Digfeer ku booqday Afhayeenka Xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimuu oo la sheegay in haatan ay xaaladiisu soo hagaageyso. Isbitaalka Digfeer ee caasimada Muqdisho ayaa lagu dabiibayaa Macalimuu, qaraxaan ayaa ahaa mid kaligiis loo soo qorsheeyey, waxuu ahaa kii shanaad oo Macalimuu uu la kulmay shantii sano ee u dambeysay. Qaarkood Alle ayaa ka badbaadiyey, halka qaarna ay ka soo gaareen dhaawacyo isugu jiray ku fudud iyo kuwo culus, qaraxii shalay waxaa ku dhintay qofkii nafiisa haligay oo kaliya.
Generaal Xuud “Wada hadal ayaan la galayaa Maamulka HirShabeelle “
General Abuukar Xaaji Warsame Xuud ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inu Wada-hadal La galay Dowladda federaalka iyo Maamulka Hir-Shabeelle, Kuna sheegay shir jaraa’id uu Maanta qabtay. Goor dhaweyd waxaa si wadajir ah u qabtay Xuud iyo Taliyaha dhulka Xooga General Maxamed Tahliil Biixi, kaasi oo gaaray baaldweyne si loo dhammeeyo dagaalka uu wado Generaal Xuud,oo in muddo ah dagaalkulajiray maamulka HirShabeelle ee uu hoggaamiye Cali Guudlaawe Xuseen madaxweynaha Maamulkaasi. Jenanaral Xuud ayaa sheegay in Taliyaha dhulka Xooga General Maxamed Tahliil Biixi uu Baladweyne u yimid dan iyo maslax guud iyo in la dhammeeyo dagaalka. Waxaa sidoo kale uu intaa ku daray in xaq uu ka maqan yahay Gobolka Hiiraan, isagoo sheegay wixii hadda ka dambeeya ay si wada hadal ah ay ku raadinayaan xaqa ka maqan oo uu sheegay in markii hore uu u dagaalamaayay. jenaral Xuud ayaa mamulka HirShabeelle si weyn uladagaalamay, waxaana magaalada baladweyne ee xarunta Gobolkaasi ka dhacay dagaallo culus oo khasaaro badan dhaliyay, kuwaasi oo dad shacab ah ay ku barakaceen.
Maamul Goboleedyada Oo Billaabaya Shaacinta Kuraasta doorashada
January 16, 2022 F.G 0
Maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa billaabay dedejinta doorashada Golaha Shacabka ayaga oo shaaciyey kuraas badan oo ay doorashadoodu qaban doonaan dhowaan. Mamaulka Puntland oo ugu dambeeyey ayaa maanta ku dhowaaqay qabashada doorashada 10 ka mid ah kuraasta Golaha Shacabka 10-ka maalmood ee soo socda. Guddiga doorashada heer dowlad goboleed ee Puntland ayaa sheegay in shan ka mid ah kuraasta doorashadooda la qaban doono 22-ka Janaayo 2022, halka shan kale la qaban doono 25-ka Janaayo. Waa kuraastii ugu horreysay ee Golaha Shacabka ee baarlamanka 11-aad oo doorashadooda lagu qabanayo Puntland. Sidoo kale, guddiga doorashada Maamulka HirShabeelle ayaa soo saraay liiska 11 kursi oo doorashadoodu ay ku qaban doonaan magaalada Jowhar. 11-ka kursi ayaa ka mid ah 13 kursi oo la qorsheeyey in doorashadoodu ay ka dhacdo Jowhar. HirShabeelle weli ma shaacin jadwalka doorashada kuraastan. Maalin kahor ayey aheyd markii guddiga doorashada maamulka Galmudug uu isna soo saaray liiska 21 kursi oo doorashadoodu la qabanayo dhowaan. Golaha Wadatashiga Qaran ee Soomaaliya, oo ay ku mideysan yihiin ra’iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa shirkii ay [Sii aqri]
Qarax dhimasho iyo dhaawac sababay oo caawa ka dhacay Magaalada Muqdisho
Ku dhawaad hal qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay qarax caawa ka dhacay isgoyska Xararyaalle ee oo ka tirsan degmada Warta nabada ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo loo adeegsaday bam gacmeed ayaa la soo sheegayaa in lagu weeraray askar ka tirsan booliska DF oo ku sugneyd isgoyska Xararyaale. Goob joogayaal ayaa sheegay salaadii cishaha kadib ay maqleen jug xoogan oo ka dhacday dhanka Isgoyska kadibna ay xigtay rasaas badan oo ciidamada rideen. Qofka geeriyooday iyo midka dhaawaca ah ayey wararku sheegayaan iney ahaayeen shacab ku dhowaa goobta uu qaraxu ka dhacay. Ciidamada ammaanka ayaa bilaabay baaritaano amni xaqiijin ah, waxayna ku daba jiraan raggii ka dambeeyay weerarkan. Waa qaraxii labaad ee 24 saac gudahood ka dhaca Muqdisho, maanta barqadii ayey aheyd markii qarax ismiidaamin ah lagu dhaawacay afhayeenka Xukuumada Somalia Maxamed Ibraahim Macalimu
Xukuumadda Iyo James Swan Oo Ka Wada Hadlay Lacagta Ku Baxeysa Doorashada Dalka
Ergeyga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay James Swan ayaa Muqdisho kulan kula qaatay Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka ee xilgaarsiinta Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Kulanka dhexmaray Wasiir Cabdiraxmaan Beyle iyo James Swan ayaa waxaa ay ugu wada hadleen arrimo badan oo la xiriira horumarka dhaqaalaha dalka oo ay kamid yihiin sida deyn cafinta iyo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah miisaaniyadda dowladda. Sidoo kale labada dhinac ayaa ka wada arrinsaday inta uu socday kulankooda maaliyadda ku baxeysa doorashada dalka ee muddo dhaafka noqotay, sida lagu sheegay Qoraal uu soo saaray Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya. Ergeyga gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay James Swan ayaa waxaa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in uu toddobaadkan la kulmay Wasiirka Maaliyadda xilgaarsiinta, Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle. Beesha Caalamka ayaa dhowr jeer shuruudo ku xirtay bixinta lacagta ay ugu taleen doorashooyinka dalka ka dhacaya, waxaana la sheegay in Wakiilada ay dalbeen in marka hore la dardar-geliyo qabsoomida doorashada Golaha Shacabka.
Xaaladda Caafimaad ee Afhayeenka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimuu oo Maanta qarax Is-miidaamin ah lagula beegsaday Magaalada Muqdisho ayaa haatan soo hagaageysa, kadib dhaawac kasoo gaaray qaraxaas. Maamulka Isbitaalka Digfeer iyo dhaqaatiirta la tacaalaysa xaaladda Caafimaad ee Afhayeenka Xukuumadda ayaa Telefashinka Dalsan u xaqiijiyay inay wanaagsan tahay Xaaladda Caafimaad ee Maxamed Ibraahim Macalimuu. Afhayeen Macalimuu ayaa lasoo weriyey inuu si caadi ah u sheekeynayo, isla markaana ogaalkiisu joogo, iyadoo dhaawac kasoo gaaray qaraxa lala eegtay uu yahay mid fudud oo dhaqaatiirtu ay sheegeen in uusan aheyn mid culus. Qarax Is-miidaamin ah oo uu fuliyey qof isku soo xiray Jaakad waxyaabaha qarxa ayaa isku qarxiyey gaari uu watay Afhayeenka Xukuumadda Maxamed Ibraahim Macalimuu, xili uu marayey meel ku dhow Isgoyska Dabka ee Muqdisho. Al-shabaab warar ay ku qoreen barahooda qadka Internet-ka ayaa waxaa ay ku sheegteen mas’uuliyada qaraxa lala eegtay Macalimuu, waxaana qaraxa ku burburay gaariga uu watay, sida lagu arkay Muqaalo iyo Sawirro laga soo qaaday gaariga.
Maamulka HirShabeelle Oo Mamnuucay In Hub Laga Soo Dejiyo Laba Garoon Diyaaradeed
Maamulka HirShabeelle ayaa soo saaray Amar uu ku mamnuucayo in hubka noocyadiisa kala duwan laga soo dejiyo Garoomada diyaaradaha ee ku yaalla Magaalooyinka Baladweyne iyo Jowhar ee HirShabelle . Wasaaradda amniga Hirshabeelle oo Qoraal soo saartay ayaa waxaa ay ku sheegtay in laga bilaabo 15-ka bishaan Janaayo aan wax hub ah laga soo dejin karin Garoomada Jowhar iyo Baladweyne, si loo dardar-geliyo doorasho hufan oo ku dhisan heshiis. Sidoo kale Wasaaradda amniga Maamulka ayaa caddeeysay in lala xisaabtami doono cid kasta oo isku dayda inay u hoggaansami weydo Amarka soo baxay, isla markaana waxaa Taliyeyaasha labada Garoon la faray inay shaqadooda u gutaan, si hufan. Maamulka Hirshabeelle ayaa sheegay inay ka go’an tahay xasiloonida deegaannada iyo ilaalinta badqabka dadka kunool deegaanadooda, isla markaana ay ka shaqeyn doonaan sidii ay ku dhici laheyd doorasho hufan oo ku dhisan heshiis. Amarka lasoo saaray ayaa kusoo aaday, iyada oo saqdii dhexe ee xalay Guddiga doorashada Hirshabeelle ay shaaciyeen Liiska 11-ka kursi ee ugu horreeysa doorashada Golaha Shacabka Baarlamaanka 11-aad ee dowladda Federaalka Soomaaliya. HOOS KA AKHRISO:
1 2 3 … 1,109 »